Nzira yeTitans: zita idzva rekupona kweLinux | Linux Vakapindwa muropa
Nzira yeTitans: Mutsva Wekupona Musoro weLinux
Nzira yeTitans iri zita idzva mari inobhadharwa nevanhu vazhinji pane inozivikanwa Indiegogo chikuva uye kuuya mu2019.Uyu mutambo wevhidhiyo iri zita rekupona rinouya kuLinux. Kana iwe uchida dinosaurs uye kupona, iwe uchave uchichida. Vagadziri vayo vanovimbisa kuti ichave nerutsigiro ruzere rweLinux, iri inhau huru kwatiri. Uye zvakare, ivo vanofunga kuunza kune nhare mbozha zvakare.
Iwe hausi kuzofamba pakati pemadinosaurs, asi uchava dinosaur kuti anofanira kurarama mune yakakura ecosystem yakapfuma mune zviwanikwa. Mutambo uyu une zvinopfuura zvine mutsigo mifananidzo uye zvine hungwaru hwekugadzira. Iyo inobvumidza mutambo unosvika mazana maviri evatambi mune ino huru digitized zvakasikwa zvakasikwa. Mariri iwe unogona kuongorora nehukuru chaihwo uye ruzivo, kupedzisa zvinangwa zvekurarama munzvimbo inogona kuve neruvengo.
Kana iwe uchinetseka nezve hunhu hwePath yeTitans Ndizvo:
Mavara anogara aripo uye kugona kunyatsogadzirisa ganda uye maficha.
Iyo yakaoma yekutsvaga system
Masystem eboka anotendera kutsvaga kwemapaketi kana emombe uye maseva anotsigira anosvika mazana maviri vatambi panguva imwe chete.
Lush nharaunda izere dinosaurs uye zvimwe zvidiki zvisati zvaitika zvisikwa.
Mikana yekushambira, kudhiraivha uye kubata hove mumakungwa nenzizi.
Multiplatform mashandiro, ese ari maviri PC, mitambo yemitambo, SmartTVs, mobiles.
Simba, rakanyatso nyorwa modding maturusi ekugadzira zvinyorwa zvitsva uye ma mods.
Kana iwe ukatamba kubva pamidziyo yakasiyana, uye ukabatanidza kune imwechete server, iwe unozogona kutamba nevashandisi vari pamapuratifomu akasiyana. Ndokunge, haina kupatsanura vatambi nemapuratifomu paunenge uri multiplayer.
Pasina mubvunzo zita rine yakawanda mikana inogona kuita kunge kopi yeimwe inozivikanwa zita, asi haisi uye inoenderera zvakanyanya. Mutengo wekutanga kuenda unozove inenge € 30 muna Zvita. Zvinogona kunge zviri kubudirira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Nzira yeTitans: Mutsva Wekupona Musoro weLinux
KDE Unganidzo ikozvino inokutendera iwe kuti ubatanidze Android ne macOS. Iyo yakagadzikana vhezheni inosvika muna Nyamavhuvhu
CoreCtrl application kudzora Hardware profiles (GPU uye CPU parameter)